शुरु भयो द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २ को डिजिटल अडिसन - LiveMandu
विश्व विख्यात गायन रियालिटि शो द भ्वाइसको नेपाली संस्करण केही दिन अघि सकिएको छ । डिजिटल अडिसन, ब्लाइन्ड राउन्ड, लाइभ, सेमिफाइनल हुदै फाइनलको यात्रा सम्म चार टिमबाट एक एक ट्यालेन्टहरु पुगेका थिए । कतारको दोहामा सम्पन्न फाइनलमा टिम दिपका सि.डि.बिजय अधिकारीले पहिलो द भ्वाइस अफ नेपालको उपाधि चुम्न सफल भए । फाइनल कार्यक्रम कतारमा रहेका हजारौ नेपालीहरुको साथमा सम्पन्न भएको थियो । जसमा धुमुस र सुन्तलीलाई बिशेष अतिथिको रुपमा देखिएको थियो । पहिलो द भ्वाइस अफ नेपालले नगद रु २५ लाख, एउटा कार, २० लाख बराबरको गित रेकडिङ्ग र बोल्ड टुर प्राप्त गर्नेछन् ।
पहिलो संस्करणको सफलता पश्चात दोस्रो संस्करण कहिलोबाट शुरु हुन्छ भन्ने सबैमा निकै उत्सुक्ताको बिषय रहेको छ । अघिल्लो चरणमा अडिसनको बारेमा धेरै अज्ञात नै थिए, कार्यक्रममको सफलता पश्चात सबैमा अडिसनको बारेमा प्रश्नहरु हुन थालेका छन् । कहिले देखि हुन्छ दोस्रो संस्करणको लागि अडिसन ? केही नयाँ परिवर्तन हुन्छ कि नाई ? जस्ता प्रश्नहरु सुनिएका छन् ।
द भ्वाइस अफ नेपालका निर्देशक लक्षमण पौडेलले पहिलो संस्करणमा फरम्याट बुझन केही समय लागेको तर अबको संस्करणमा सहज हुनुका साथै केही नयाँ परिवर्तन पनि हुने बताउनु भयो । अन्य अडिसन भन्दा यो डिजिटल अडिसन निकै सहज पनि रहेको छ । घरमै बसेर रेर्कड गरेर आफनो अडिसन दर्ता गर्न सकिनेछ । अडिसन कै लागि भनेर लामो लाइनमा बस्नु पर्ने बाध्यता रहने छैन । पहिलो सिजन कान्तिपुर एच डीमा प्रसारण भएको द भ्वाइस अफ नेपाल यस पटक भने हिमालयन च्यानलमा हुदै छ ।
द भ्वाइस अफ नेपालको डिजिटल अडिसनको लागी आफ्नो आवाज द भ्वाइस अफ नेपालको एपमा सेन्ड गर्न सक्नु हुन्छ । एप तलको लिंकमा छ ।
द भ्वाइस अफ नेपालको सम्पुर्ण टिमलाई पहिलो संस्करणको सफलताको लागि बर्धाइ तथा दोस्रो संस्करणको लागि शुभकामना ।
Do you have Intermittent Explosive Disorder ?(an outburst of violence and anger)
द भ्वाइस अफ नेपालमा बैशाख १२ को स्मरण
के छ अनलाइन शिक्षाको फाइदा ?